WAXAAN NAFTAADA U DHIGNAA SIGAAR CABBISTA - DHISMAYAASHA
Guriga ama cottage ayaa ah midka ugu haboon ee loogu talagalay sameynta sigaarka yaryar ee yaryar, u ogolaanaya waqti kasta inuu ku raaxeysto hilibka sigaarka cabba, hilib doofaar, digaaga ama kalluunka.
Dhismaha qiiqa sigaarka uma baahna kharashka dhaqaale ee titanic ama aqoon aad u qoto dheer oo dhismaha ah, natiijadu waxay ka badan doontaa dhammaan filashooyinka, sababtoo ah mid ka mid ah mashiinka dukaanka ugu casrisan waxaa lagu barbar dhigi karaa cuntada guriga lagu kariyo ee gacmahaaga.
Waxaan ka dhignaa dayrarka qurxinta leh ee gacmahooda.
Halkan ka akhri dhammaan wixii ku saabsan trellis ee dhirta fuulaya.
Fiiri sawirrada aqallada lagu koriyo: //rusfermer.net/postrojki/sadovye-postrojki/teplichnie-soorujeniya/parniki-etapy-stroitelstva-i-osobennost-vyrashhivaniya-v-nem.html
Dhismaha dacha smokehouse ugu fudud ee ugu yaraan 1000-1900 p. Si aad u dhisto, waxaad u baahan doontaa waxyaabaha soo socda:
Grill barbecue (180-245 r);
gumaysiga birta (500-750 r), iyo waxyaabo badan oo cajiib ah, oo la mid ah malabyo waaweyn, ayaa laga yaabaa in laga tago tan iyo wakhtiyadii Soviet;
laba leben oo casaan ah (13-17 p halkii gabal);
galka birta (200 p);
saxanka birta (150 r);
5 litir dherer ah ama baaldi bir ah (180-500 r), dabcan, uma baahna inaad iibsato kuwa cusub, waxaad u qaadan kartaa kuwa waayeelka ah ilaa inta ay nadiif yihiin oo dhan, oo aan lahayn dhoobo.
Si aad u sameyso smokehouse:
laba lebbiye ayaa la geliyaa brazier;
Duufaan ayaa lagu dul dhigay daboolka sare;
waxaa lagu ridi doonaa xannibaad;
saxaarad ama saxaarad ayaa la dhigayaa hoosteeda, halkaasoo baruurta iyo casiirka ay ku socon doonaan;
on guluubka ku rid dhoobo weyn oo bir ah.
Sigaar-cabbir fudud ayaa diyaar ah. Hadda waxaad u baahan tahay dhuxul ama qoryo, iyo sidoo kale jajabka dhirta. Waxaa lagama maarmaan ah in la qaato jajabyada qoryaha si ay u daboosho qayb hoose oo sigaar ah oo la isku qurxiyo oo leh lakab khafiif ah. Cunug yar ayaa ku filan.
Waa in la xusuustaa in si loo yareeyo qadarka walxaha halista ah ee laga sii daayey qiiqa, waa in marka hore la gooyaa qashinka.
Qiiqa sicirku waa inuusan noqon mid aad u badan, maadaama ay si xun u saameyn doonto dhadhanka saxanka, waxay siinaysaa qadhaadh xoog leh, xitaa waxay noqon kartaa waxyeello caafimaad, taasoo keenta xanuunka dheefshiidka iyo joojinta hawsha beedka.
Inta badan waxaa loo isticmaalaa qashinka qoryaha sigaarcabka ka soo geedaha geedo midho leh - xayawaan, pears, tufaax. Chips qoryaha Alder wuxuu siin doonaa duufaan si ay hilib sigaar cabbaan, iyo dhuxul - caraf udgoon oo joogta ah. Qoryaha waaweyn oo ay ka mid yihiin geedaha, geedaha iyo dabka ayaa si aaney ah ugu haboonayn sigaarka, maadaama ay siin doonaan dhadhanka sigaarka ah dhadhan qadhaadh.
Haddii bacaha qoryaha qoryaha loo isticmaalo, ka dibna waa inay noqdaan kuwo aan lahayn jilif. Si aad u bedesho dhadhanka hilibka qiiqan, juniper, jajab, caleemaha cherry ama currant waxaa lagu daraa chips.
Cunto sigaar ah oo sigaar ah oo laga helo lebbiska ayaa horey u ah dhaqaale aad u qaali ah, kaas oo ku kici doona $ 100-200.
Dhammaan wixii ku saabsan sii kordhaya iyo daryeesha foornooyinka, fiiri boggayaga internetka.
Noocyada beeritaanka huurka: //rusfermer.net/sad/tsvetochnyj-sad/vyrashhivanie-tsvetov/vyrashhivanie-gortenzii-na-priusadebnom-uchastke.html
Smokehouse la gacmihiisa
Waxyaabaha ugu horreeya ee la sameeyo marka aad dhiseysid sigaarcabka adag ee sigaarka ah ee gacmahaaga ayaa ah inaad doorato meel ku habboon.
Ha ilaawin in isticmaalka ay la xiriirto dabka, markaa waa in aysan wadaagin dhismayaasha degaanka ama guryaha la deggan yahay.
Bixinta hoose ee goobta sigaarka ah waa inuu ahaadaa ugu yaraan 4 X 4 sq. M. Intaas waxaa sii dheer, waa in la dhisaa si ay uula socoto hareeraha agagaarka ah. Waxaa ka wanaagsan in la doorto meel ku taalla buur yar oo ah meerto yar.
Maxaa qalab u baahan
Si loo dhiso sigaar-cabuhu wuxuu u baahan doonaa waxyaabahan soo socda:
150-200 pcs oo lebenyo ah, laakiin ma dabooli karo, sababtoo ah markii kuleylka qallafsan uu sii deyn karo walxaha waxyeelada leh;
qalalan qallalan ee dunta, dhoobada dhoobada;
tuubo biraha aan galaaska la galin ama foornada birta aan hoosta ku jirin;
foornada albaabka ama daboolka.
Markii hore dhulku waxay u qabsadeen godad shoolan leh qoto dheer oo ah 25 cm, width width 35 cm iyo dherer 3 m.
Ka dib markii godka la qoday, waxaad bilaabi kartaa inaad geliso derbiyada godka shooladda, kaas oo lagu sameeyo dhinacyada oo isticmaalaya mashiinka dhoobada oo keliya.
Daarada sare, kan waxaa lagu daboolay walaxda kulaylka u adkaysta, tusaale ahaan, warqad biraha ah 4 mm qaro weyn.
Dhamaadka shooladda, qolka qiiqa waxaa lagu rakibay aag ah 1 sq m iyo dhererkeedu yahay ilaa 1.5 m. Awoodgan, foosto bir ah oo aan lahayn hoosta ama tuubbo ayaa loo isticmaalaa.
Waa wax la aqbali karo in qolka qiiqa laga saaro lebbiska. Waxyaabaha ugu muhiimsani waa in kanaalka bacalka uu galo qaybta hoose ee qolka oo aan ka yarayn 25 cm Ka dib markii lebbiska uu si buuxda u qalajiyey, waxaa lagu daboolay lakabka dhulka ugu yaraan 10 cm qaro weyn.
Qeybta sare ee qiiqa sigaarka, waxaa lagu rakibay alaabada biraha ah ee alaabta loo diyaariyey sigaarcabka ayaa la joojinayaa. Kaamirada waxaa lagu daboolay albaabka dabka ama dabool bir ah oo ku habboon.
Sigaar-cabeedka guriga ee guriga
Sigaar yar oo sigaar ah, waa sahlan tahay inaad dib udhigto cunto kariye caadi ah, waxaadna isticmaali kartaa qalabkaas oo kaliya maaha oo kaliya dalka, laakiin sidoo kale guri dabaq ah.
Marka hore, furka ayaa laga saaraa daboolka wax lagu kariyo, kadibna waxaa laga jaraa dabka. In width, waa in ay ku habboon tahay dhexroorka gudaha ee karinta cadaadiska, iyo dhererka - si ay u gaaraan barteeda.
Waxyaabaha xigta ee la samaynayo waa inay leexiyaan xariijinta birta ah ee ku jirta 2-3 mitir oo ballaaran, waa in lagu dhejiyaa hoosta mashiinka cadaadiska ah oo lagu daboolay chips ama chips alwaax.
Ka dib qaadashada saxanka caadiga ah ee boorka ah ee dhexdhexaad ah sida dillaac yar oo u dhaxeeya derbiyada mashiinka cadaadiska iyo geesaheeda. Tijaabadu waxay ka ciyaari doontaa doorka pallet ee casiirka iyo dufanka. Waxaa lagu dhajiyaa qoryaha dhaadheer oo qaali ah, saldhig ayaa la dhigayaa dusha sare, iyo alaabta loo diyaariyay sigaarka, sida sausages ama chicken ham, waxaa lagu ridayaa weelka.
Kadibna waxay xiraan mashiinka cadaadiska leh daboolka iyada oo aan laheyn meel aan laheyn iyo, meesha valf lagu dhajiyay, gali tuubo gali, taasoo keenaysa dallad diiran ama kaliya hawada hawada.
Mashiinka cadaadiska lagu rido kuleylka sarreeya iyo cuntooyinka qiiqan 30-35 daqiiqo.
Cottage-ka oo aan lahayn ariida canabku way adag tahay in la qiyaaso. Baro boggayaga internetka ku saabsan noocyada canabka miiska.
Akhri maxay yihiin canabkii ugu fiicnaa: //rusfermer.net/sad/vinogradnik/sorta-vinograda/luchshie-sorta-vinograda.html
Smokehouse fudud ka soo qaboojiyaha hore
Qaboojiyaha hore uma baahna in la tuuro. Way ka fiican tahay in lakabiyo qolka qabow ee sigaarka cabba.
Tani waa mid fudud:
rinjiga, balaastiga balaastigga ah, qaybta qaboojiyaha ayaa laga saaraa qaboojiyaha, shubanka waxaa laga xoqay ka soo goysyada haddii loo baahdo;
derbiga dambe ee qaboojiyaha waxaa lagu xiray gabal gogol ah;
ka dibna dalool ayaa lagu qodaa dusha sare ee qaboojiyaha, halkaasoo qiiqa uu tagayo;
qaybta hoose ee qaboojiyaha waxay dhigayaan santuuq ku habboon miisaannada ku habboon ama, haddii aan la heli karin, oo laga sameeyay gacan-ka-soo-saarka birta oo leh qiyaas ahaan qiyaastii 0.5 mm;
qaboojiyaha gawaarida qaboojiyaha.
Chips waxaa lagu daboolay lakabka khafiifka ah ee santuuqa oo ka soo baxaya xagga hoose oo leh faybar. Alaabooyinka sigaarcabka waxaa lagu dhajiyaa shaashadaha birta qaboojiyaha ee qaboojiyaha.
Si aad u dhajisid dhadhanka yar, laakiin ma gubin, waa in ay ahaato ugu yaraan goynta helitaanka oksijiinta. Sidaa awgeed, albaabka qaboojiyaha ayaa si adag u xira mandheerta.
Ma aha mid aad muhiim u ah in sigaar-cabidda laga sameeyo lebbiska ama laga sameeyo qaababka ugu habboon ee macquulka ah - dhadhanka hilibka guriga lagu cabbo sigaarka ayaa noqon doona farxad dhab ah.